कोका–कोलाद्वारा नेपालमा नयाँ जिग्री प्याक सार्वजनिक - सिधा दृष्टी
ishwor शनिबार, साउन २५, २०७६ | August 10, 2019
जिग्री प्याक उपभोक्तामैत्रीसँगै वातावरण मैत्री पनि छ, यो अल्ट्रा लाइट बोतल हो
र अन्य पीईटी बोतलजस्तै यो रिसाइकल पनि हुन्छ । कोका–कोलाले हलुका, पूनशिलबन्दी गर्न मिल्ने, लाइटवेट तथा नफुट्ने बोतल भएको पेय पदार्थ प्रदान गर्न यो प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । साथै यसको विस्तारित आयू ६ महिनासम्म रहेको छ ।
हाम्राे घुँडा किन दुख्छ ? यसकाे उपचार के ?
प्रदेश प्रहरीको कमान्ड केन्द्रकै डीआईजी